Maamuuska 7X dib u eegis: astaamaha, qiimaha, iyo inbadan. Mudan? | Androidsis
Maamuus 7X dib u eegis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Noticias, Reviews
Markan waxaan wajahnay Smartphone oo sumcad aad u wanaagsan ku dhex leh adeegsadayaasheeda ugu horeeya. Ku Sharaf 7X, kale oo weyn qalab soo socda ee warshada aan kala go’a lahayn laga bilaabo Huawei. Waad ku mahadsan tahay qeexitaankiisa iyo muuqaal muuqaal ahaan soo jiidasho leh, waxay ku tilmaameysaa mid aad u sarreeya bartamaha dhexe ee Android.
Sharafta cusub ee 7X waxay xaqiijineysaa in masaafada udhaxeysa waxa loogu yeero bartamaha iyo dhamaadka-sare ay sii kordheyso wax aan jirin. Tanina waa wax mararka qaarkood goor hore la ogaado. Kaliya markii aan gacanta ku hayno qalabkan waxaan ogaanay inaysan ahayn casriga caadiga ah.
1 Maamuus 7X, xubin ka mid ah noocyo cusub
2 Loogu talagalay in aan la ogaanin
3 Waxyaalaha sanduuqa ku jira
4 Shaashad "aan dhammaanayn" oo loo yaqaan FullView
5 "Mootada" ee Sharafta 7X, dhererka nasashada?
6 Android iyo Emui waxay lammaane wanaagsan ku sameeyaan Sharafta 7x
7 Labada kamaradood ee 'Honor 7x', oo ah jilaa kale oo weyn
7.1 Codsiga kamaradda Emui wuxuu na siiyaa qaabab badan iyo saameyn
8 Batariga sifiican loo hagaajiyay Honor 7X
9 Dhawaaqa iyo kuhadalka Sharafta 7X
10 Xaashida xogta Huawei Honor 7X
11 Sharafta 7X ee ugu fiican uguna wanaagsan
11.1 Sharafta ugu fiican 7X
11.2 Horumarinta Sharafta 7X
12 Fikirka Tafatiraha
Maamuus 7X, xubin ka mid ah noocyo cusub
Waxaan in badan ku celcelinaynay baryahan dambe gudaheeda heerka dhexe ee hadda jira ee Android waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya qalabka. Marka laga reebo kuwa loo arko inay yihiin kuwa laga soo galo ama taleefannada aasaasiga ah. Waxaa jira boodboodyo tayo leh marka la eego waxqabadka iyo naqshadeynta oo aad u soo jiidaneysa in aan la dareemin.
Aalado uruuriya macaash ilaa dhawaanahan u gaar ahaa taleefannada leh qiime sare. Mar kasta oo ay ka sii qarsoodi badan tahay waxaan markhaati ka nahay abuuritaanka nooc cusub oo ka mid ah waaxda. Waana taas heerka dhexe waa mid aad u yar sharaftaan 7X sababo badan awgood.
In kastoo Sharafta 7X waxay ahayd dabayaaqadii sanadkii 2017 si loogu tixgeliyo istaag. Soo bandhigidiisa bilowga Diseembar ayaa u adeegaysa isaga, sida had iyo jeer, si ay u noqoto farqiga u dhexeeya taleefannada casriga ah ee ugu caansan xilligan oo dhan isbarbardhiga hadda.
Kaliya fiiri dhaqso farsamooyinkeeda. Waxyaabaha kale, Sharafta 7X waa isugeyn dhammaan waxyaabaha cusub ee soo maray waaxdan sanadkii la soo dhaafay. Waxaan aragnaa sida wax walba oo cusub loo qaatay inay iyagu leeyihiin si ay isugu daraan una sifeeyaan illaa aan ka helno badeecad runtii wanaagsan.
Laga soo bilaabo isaga laba kamarad gadaal gadaal. Ilaa ay weyn 5,93 inch screen in lagu degdego jir inta ugu macquulsan. Ku ag maraya faraha akhristaha gadaal Ma seegi karno waxqabad kasta oo shaqeynaya oo guuleystey bilihii dhowaa. Hadana waxaas oo dhan waxaan ku dareynaa "mootooyin" heer sare ah waxaan wajaheynaa wax ka badan awooda Smartphone.
Loogu talagalay in aan la ogaanin
Huawei, iyada oo loo marayo saxiixa labaad Sharaf, wuu ogyahay in qaabeynta aaladda ay aasaasi tahay. Suuqa si xad dhaaf ah loogu buuxiyey noocyo iyo moodooyin, waxaa muhiim ah in badeecadu muuqaal ahaan qurux badan tahay. Iyo sharafta 7X waxay ku guuleysteen. Natiijadu waxay tahay taleefan casri ah oo wata macdan dhameystiran oo ku jira codadka cowska ee u muuqda mid aad u fiican.
Waa mid ka mid ah dhammadka sanadka. Qalabka biraha ayaa ku soo noqday si ay u sii joogaan. Laakiin joojinta, isku imaatinka, iyo sumcadda sidoo kale waa dhinacyo la tixgelinayo. Sharafta 7X-na waxay soo jiidasho u tahay isha iyo taabashada. Ku nuuxnuuxsaday caato ah, caato ah taas oo ka soocda moodooyinka dhumucda aan la tirin karin. Oo noqo noqo taleefan casri ah oo khafiif ah iyada oo aan la siinin batariga wanaagsan. Kasbashada xitaa tiro dheeri ah marka tani aysan saameyn ku yeelan miisaan culus.
Falanqaynta Honor 7X qaybo, waxaan aragnaa sida muuqaalkeeda muuqaal ahaaneed waxaa lagu qeexay shaashad ballaaran oo ku dhowaad gebi ahaanba ku jirta qaybta hore. Telefoonka "Bandhigga Infinity" waxay maamushaa inay siiso aaladda muuqaal gaar ah. Badhamada awoodda ayaa ku dhex jira shaashadda. Iyo in kor waxaan si sax ah u helnay meesha dareemayaasha iyo kamarad hore.
In uu dhinaca bidix, kaas oo bilaash ka ah badhannada, waxaan helnaa mid caadi ah booska kaararka. Su Dhinaca midig waxaan helnay ah badhanka awoodda iyo badhanka xakamaynta mugga. Taas oo kiiskan ah hal badhan oo dheeri ah oo ay ku jiraan labada koontarool ee dhammaadka. Iyadoo aan la helin wax tijaabo ah ama ugub ah. Waa lagu qanacsan yahay in wax walba ay yihiin meeshii laga rabay.
In uu dhinaca hoose waxaan ka heli, bidix ilaa midig, aqbasho codka jaakad yar. Uma baahnid adapters si aad u isticmaasho dhagaha maqalka ee aad ugu jeceshahay. Bartamaha, waxaa mini isku xira mashiinka lacag bixinta, wax aan u tixgelin karno xoogaa dib-u-habeyn loogu talagalay terminaal xad-dhaaf ah Fashilmay? Waxay si fiican ugu dari lahaayeen isku xiraha USB Type-C cusub, laakiin ma aysan helin. Midigta midigna waxaan ka leenahay godadka afhayeenka, qalab kale oo aan ku tiirsaneyn codka maqalka ee rikoodhada
In uu gadaal waxa ka sarreeya wax kasta oo kale ayaa ah waxyeello kamarad sawir leh. Iyadoo leh laba muraayadaha indhaha oo wax yar ka soo baxa jirka taleefanka. Oo waxay ku siinayaan sawir ugu yaraan ka duwan. Waxay umuuqataa mid aad ufiican, runti, laakiin taleefanka oo miis dul saaran, "soo bixitaankan" ayaa kadhigeysa mid dhinac u dhutinaya oo aan si buuxda u taageerin. Tooshka, taas oo kiiskan aan labalaabnayn, ay ku taal bidix ee kamaradda.
Wax yar ka hooseeya, oo ka sii xuddun badan, waxaan helnaa faraha akhristaha. Fikradayda sida ugu khaldan uguna raaxada badan in la isticmaalo goobta. Iyo waxqabad aan caadi aheyn oo wanaagsan. Akhrinta iyo furitaankaba labadaba si dhakhso ah ayey u socdaan. Shaqo weyn shaki la'aan akhristaha sawirka faraha ee si fiican ugu dhex milma dhabarkiisa birta. Oo xawaarihiisu uu muuqdo markaan barbar dhigeyno taleefannada kale ee leh akhriska faraha.
Sidaan nidhaahno, waxyaabo badan oo naqshadeyntaada ah oo aad jeceshahay oo si fudud u soo gala aragga. Kuwa ay dhammaadka qalooca dhammaan xag kasta. Isaga dhammeystiran macdanta midabka matoorka. ka caato jidhkeeda. Iyo isdhexgalka saxda ah ee shaashad weyn oo jirka ka yar kan smartpons oo leh shaashad 5-inji ah.
Maamuusku wuxuu sii wadaa inuu caan ka dhex noqdo macaamiisha iyada oo loo marayo istiraatiijiyad wanaagsan. U fiirso qalab si fiican loo dhisay. Waxayna dib u dhigeysaa kuwa xiiseynaya markay ogaadaan waxa sharafti 7X ku dhex qarsoon tahay. Honor 7X waa taleefan casri ah oo soo jiidasho leh, laakiin sidoo kale waa ka sii badan tahay.
Waxyaalaha sanduuqa ku jira
Sida had iyo jeer, markaan helno qalab cusub, waxaan jecel nahay in aan qaadanno alaabada oo arag dhammaan waxyaabaha soo galaya sanduuqa gudihiisa. Markaad furto, xagga hore waxaan ka helaynaa taleefanka laftiisa. Waxaan sanduuqa ka dhex helnay biinanka aan u adeegsan doonno inaan ku furno kaarka kaarka oo ku yaal dhinaceeda bidix.
Sida caadiga ah, waxaan sidoo kale leenahay Fiilo USB ah oo loogu talagalay xogta iyo lacag bixinta. Iyo xeedho si loogu xiro fiilada ilaa shabakadda korontada. Ogsoonow in kan dambe uusan la jaan qaadi karin qalabka Yurub. Laakiin shirkadu waxay leedahay "faahfaahin" ku darida adabtarada si aan u isticmaali karno. Adabtarada ayaa la mahadiyey, laakiin xeedho qaas ah oo aan u baahnayn "siyaado" ayaa xiiso yeelan lahayd.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan marar badan ku aragno sanduuqa ayaa ah daboolka. Kiiskan, Sharafta ayaa sidoo kale dooratay in lagu daro kiis silikoon ah oo hufan. Wax aad u qiimeeya maaddaama ay tahay aaladda aan badanaa iibsanno marka ugu horreysa ee aan taleefanka furanno. Intaa waxaa dheer, waxaan wajaheynaa kiis silikoon tayo leh, oo leh astaanta astaanta taasna waxay dareemeysaa sida gacmo gashi aaladda.
Nasiib darrose, sidoo kale waa wax iska caadi ah, in soosaarayaashu doortaan ha ku darin headset ahaan qalab ahaan. Iyo sharaf ayaa ku soo biirtay isbeddelkan. In kasta oo aan adeegsan karno wixii sameecad ah, haddana waxaan mar walba jecel nahay inaan qaar sii deyno isla waqtigaas oo aan sii dayno taleefan casri ah. Aad ayey ugufiicantahay kiiska silikoonka, laakiin waxay uxun tahay maqnaanshaha dhagaha.
Shaashad "aan dhammaanayn" oo loo yaqaan FullView
Iyada oo ah hal suuq oo kale, waxay umuuqataa in shaashadaha ay sii kordhayaan oo ay sii kordhayaan. 5 inji, taas oo maalintoodii u muuqatay mid la buunbuuniyey, waxay noqonayaan kuwo gaboobay. Oo waxaa jira wax soo saarayaal yar oo sii wadaya inay sharad ku yeeshaan cabirraddan taleefannadooda cusub. Sharafta 7X kaliya kama tagayo 5 inji. Isaga oo isku dayaya inuu xawaaraha sare ee guddiga sare u dardar geliyo, wuxuu ku maareynayaa inuu "u kala bixiyo" waxyaabo aan caadi aheyn 5,93 inches. In kasta oo cabirku aanu ahayn wax walba.
La Qiyaasta qaybta hore ee deganaanshaha shaashadeeda waxay gaadhaysaa 77%. Wax aad uga sarreeya waxa aan ka heli karno baaxadda ay ku taal Maamuus 7X. Cajiib Gudiga IPS oo leh xal buuxa HD +. Waxaan ula jeedaa 2.160 x 1.080. Waxaan ka hadleynaa a 407 dpi pixel cufnaanta. Tayada muuqaalka, midabada diirran iyo xalka waxay ka dhigayaan waayo-aragnimo isticmaale aad u fiican.
Waa in la ogaadaa in heerka dhalaalka shaashadu waxay bixisaa waa aad u sarreeya wixii aan ugu baranay si la mid ah terminal-yada mudnaanta leh. Wax dhibaato ah kuma lahaan doontid aqrinta shaashadda dibedda, xitaa iftiinka qorraxda. Xog ahaan farsamo ahaan, ayaa la sameeyay tijaabada Antutu BenchMark, waxaan aragnaa inay heleyso ilaa toban dhibic oo isku mar ah imtixaanka taabashada badan.
Shaashadda 'Honor 7X' wax badan ayaa u socda. Tani loogu talagalay qaabka 18: 9, sidaas awgeed ka dib isbeddel isku dhafan. Iyo in ay runti tahay mid raaxo leh si fiidiyowyadu ay ugu habboon yihiin cabbirradooda. Sidoo kale iftiiminaya Ikhtiyaar isku-darka barnaamijkaaga oo ay na weydiin doonto waqtiyada qaarkood haddii aan dooneyno inaan isticmaalno shaashadda buuxda. Si fudud ugu habboon mawduucyada si buuxda ugu habboon xag-jirnimada.
Thanks to telefoonada sidan oo kale ah, daawashada filimka, taxanaha, ama ciyaarta waajibaadka ah kuma sii koobnaato kiniiniyada iyo kumbuyuutarrada. Maamuuska 7X wuxuu ku faani karaa inuu haysto mid ka mid ah shaashadaha ugu waaweyn dhexda. Iyo waliba marka lagu daro inuu ku dhex jiro heer cabbirka jirka casriga ah. Muuqaalka muuqaalka ah ee looxyada sare iyo hoose ee caatada ah wuxuu siinayaa kala soocid iyo tayo. Gaar ahaan haddii shaashadda lafteeda, lagu ilaaliyo Gorilla Glass 3, waa wax aad u wanaagsan in la cuno waxyaabaha ku jira warbaahinta badan.
"Mootada" ee Sharafta 7X, dhererka nasashada?
Waxaan horey kuugu sheegnay waxa aan ka helno naqshadeynta Sharafta 7X. Shaqo wanaagsan oo lagu qabtay xulashada qalabkaaga. Iyo isku imaatin iyo dhammeystir u qalma in ka badan terminal "top". Laga soo bilaabo shaashad aan caadi aheyn oo bixisa tayada dhammaan dhererka iyo ballaca korontada hore oo la tuujiyey si buuxda. Haddii intaas oo dhan aan ku darno processor xoog leh, dhibcaha dhibcaha 'Honor 7X' mar kale dhibco.
Dhinacan Sharafku wuxuu gebi ahaanba ka soo baxayaa processor-yada ay adeegsadaan inta badan. Sidee bay noqon kartaa si kale, iyadoo la adeegsanayo a Processor processor Huawei. Gaar ahaan, Sharafta 7X "way dhaqaaqdaa" mahadsanid Kirin 659. a bixinta octa-core 2.36 GHz. Wehelinta Kirin 659, waxay leedahay a Mali-T830 MP2 GPU. In kasta oo ay tahay processor-yari la caddeeyay, haddana waxaannu kuu xaqiijin karnaa inay wax-qabadkiisu wax kasta ka sarreeyo.
"Dhibaatada" markaan wajaheyno Smartphone oo wata processor-ka aan isticmaalkiisu badneyn wuxuu yimaadaa marka lala barbardhigo kuwa kale. Xaaladdan oo kale, kaliya taleefannada kale ee Sharafta leh ama Huawei lafteeda ayaa kor u qaadaya qaabkan processor-ka ah. Tusaale ahaan in processor-kan loo diyaariyey inuu xaliyo hawl kasta, waxaan u aragnaa taas Huawei Mate 10 Lite sidoo kale wuxuu doortaa processor-kan. Mid ka mid ah aaladihii ugu dambeeyay ee shirkadda Shiinaha ee go'aamisay in la helo Kirin 659.
Mid ka mid ah kuwa waa weyn Faa'iidooyinka Sharafta Sharafta ee processor-keeda ayaa iswaafajin buuxda ah. Warqad ahaan, qalab la jaan qaadaya processor-ka ganacsi ahaan loo heli karo waa inuusan isku si u shaqeyn. Marka loo eego qalab kale oo isticmaala aalad uu naqshadeeyay guriga laftiisa iyo inuu u isticmaali doono si gaar ah. Tani waxay samaysaa inaad aragto kuleylka taleefanka ayaa ah wax aad loola yaabo. Taasna ku habboonaanta si loo xakameeyo isticmaalka batteriga noqosho lahayn.
In kasta oo ay tahay in sidoo kale la aqoonsado in qayb weyn oo ka mid ah eedda loo leeyahay xaqiiqda ah in Sharafta 7X ay awood badan tahay iyo in hawlgalkeedu la socdo xallinta noocaas ahi ay tahay 4GB RAM. Nambarada ay maanta adag tahay in laga helo bartamaha iyada oo aan qiimaha "aaladda" si raaxo leh uga badnayn saddex boqol oo euro. Sabab kale oo Smartphone-kan ah inuu u kala sooco oo uga soocan inta kale.
Waxqabadka oo, marka la barbar dhigo tusaale ahaan processor aad loo yaqaan oo la isticmaalo sida Qualcomm's SnapDragon 625, wuxuu bixiyaa xog aad u la mid ah. Oo uu galo imtixaanka waxqabadka Antutu 58.664 dhibcood. Maxaa maxay waxay ku sharfeysaa sharaf 7x oo ka sarreeya boqolkiiba 80 qalabka. Wax yaab leh oo ka hadlaya baaxadda ay ku taal.
Sida for kaydinta awoodda, nooca 7x ee aan tijaabineyno ayaa leh 32 GB oo xusuusta ah. Dabcan lagu ballaarin karo kaarka xusuusta. Waxay umuuqataa in soosaarayaasha ay xaqiiqdii macsalaameynayaan ku filnaan la'aanta 16 GB maanta.
Android iyo Emui waxay lammaane wanaagsan ku sameeyaan Sharafta 7x
Had iyo jeer waxaan dhahnaa, Androidsis ma nihin taageerayaasha lakabyada qaabeynta loogu talagalay Android. Shakhsiyan, waxaan tixgeliyaa in nidaamka Android sida loogu talagalay, oo leh faa'iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa, uu yahay mid dhameystiran oo qumman. Sidaas darteed, lakab shakhsi ahaaneed oo ku dul yaal ayaa ah waqtiyada badankood kuwo aan loo baahnayn maadaama ay ka soo horjeeddo.
Laakiin waxaa jira waxyaabo ka reeban oo ku saabsan "dharka" taas oo shirkadaha qaar ay "ku labistaan" Android. Emui waa tarjumaad aamin ah oo Android ah. Waxayna muujineysaa menu aad u waafaqsan waxa Nidaamka Howlgalka Google uu bixiyo. Illaa iyo hadda ma helin wax khilaaf ah. Mana xaddidno helitaanka marka la eego qaabeynta ama qaabeynta qalabka.
Muddo sanado ah, daboolka Emui ee Huawei iyo Honor waxay uruursadeen dhaleeceyn badan. Waxaa loo tixgeliyaa inbadan oo ah lakab shaqsiyeed khaldan, waxay xitaa u maleyneysay in labada shirkadoodba doortaan xaaladan. Nasiib wanaag Huawei, Emui wax badan buu isbedelay oo horumariyay. Maantana wax shaqo ah kuma lahan sidii ay ahayd dhawr sano ka hor.
Waxaan haynaa Emui qaabkeeda 5.1, oo ku saleysan Android 7.0. Iyo muuqaal ahaan muuqaal ahaan, oo ah waxa ugu horreeya uguna fudud ee noqda waxa lagu dhaleeceeyo, waxaan u kuur galeynaa inaysan xumaan. Si kale haddii loo dhigo, qaabka Emui u soo bandhigo astaamaha barnaamijyadeeda xitaa isha ayuu ku soo jiidanayaa. Waana xaqiiqo in marka la istcimaalo isla Nidaamka Hawlgalka in badan, isbeddellada qaarkood, haddii lagu sameeyo dhadhan fiican, ay tahay xitaa wax lagu farxo.
De Emui 5.1 waxaan iftiimin karnaa caawiye caaqil ah. Waxay na siisaa suurtogalnimada in la isku hagaajiyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan taleefan u dir ficillada. Waxaan leenahay a kaaliyaha codka oo sifiican isu difaaca. Waxaan barnaamij ka siin karnaa taleefanka shidan iyo deminaba. Waxaanuna leenahay a badhanka sabayn in aan ka heli karno qaybta shaashadda ee aan dooranno. Iyo kan aan ku siin karno badhano kale oo leh ficilo kala duwan.
Markaa inkasta oo aan la kulanno lakabka u-habeynta Android. Oo ha u noqdo Emui-kii caanka ahaa. Waa inaan aqoonsanno inay si weyn u fiicnaatay illaa heer laga fikiro mararka qaarkood, waana ku mahadsan tahay hawlo dheeri ah, isbeddelka nidaamka Android laftiisa.
Labada kamaradood ee 'Honor 7x', oo ah jilaa kale oo weyn
Waxaan horey u soo sheegnay shaashadda weyn ee Sharafta 7x ay leedahay. Waadna ku mahadsan tahay cabirkeeda aan caadiga ahayn, waa mid ka mid ah hantida weyn ee qalabkan. Laakiin marka lagu daro shaashad gaar ah oo soo jiidasho leh, qaybta kaamirada ayaa si farxad leh nooga yaabisay. Labada kamaradood ee qalabkani wuxuu u shaqeeyaa si la yaab leh iyo waxay bixisaa tayo ay dad badani hubaal ka hinaasi doonaan.
Kaamirada gadaal ayaa leh laba dareemayaal oo is barbar socda muuqaalkeedu aad u soo jiidasho badan yahay. Waan helnay mid ka mid ah 16 megapixels iyo mid kale oo ah 2 megapixels. Hawlgalkeedu si la yaab leh ayuu u fiican yahay xitaa xaaladaha iftiinka yar. A xawaaraha diirada ka dhakhso badan sidii la filayay. A qeexitaanka midabada macquul ah. Isku dheelitirnaan cad Iyo heer faahfaahin ah iyo dherer dherer. Samee taas kamaradda Honor 7X waxay u qalantaa qiimeyn aad u wanaagsan.
Faa'iidooyinka kamaradda waxaan ku darnaa barnaamijka sawir qaadista, Emui ayaa iska leh, taasi waxay na siisaa fursado aan la koobi karayn. Qalabka otomaatiga ah iyo gacanta awoodeena ugu habboon kamaradaha ugu fiican. Mahadsanid a maaraynta fudud oo dareen leh waxaan inta ugu badan ka heli karnaa kamarad aad u fiican.
Codsiga kamaradda Emui wuxuu na siiyaa qaabab badan iyo saameyn
Intaa waxaa dheer, iyo in la dhammaystiro xirmada sawir qaadista, waxaan isticmaali karnaa qaabab kala duwan iyo saameyn xiiso leh. Iyaga ka mid ah qaabka sawirka ayaa ka muuqda inta ka hartay inta kale. Dejinta otomaatig ah oo ka dhigaysa tallaabada sawirkeennu inay gaarto heer aynaan rumaysan doonin.
El hab furitaan ballaaran waxay sidoo kale bixisaa natiijooyin aad u wanaagsan oo aad ugu dhow kuwa la helay markii la isticmaalayo xulashada sawirka. Maamuusku wuxuu ku guuleystey inuu ku qiimeeyo qalabkiisa mid ka mid ah dhinacyada aadka looga fiirsado maanta marka aad iibsaneyso taleefan. Xitaa iyada oo aan la helin inta kale ee astaamaha farsamada ee Smartphone-ka oo cajiib ah. Kaamirada wanaagsan waxay macnaheedu noqon karaa inaan go'aan ka gaarno mid ama midka kale ee casriga ah. Honor 7X wuxuu isku daraa kamarad runtii wanaagsan oo leh waxqabad xoqan oo dherer fiican leh.
Sawirro laga qaaday nalka dabiiciga ee wanaagsan waxay bixiyaan tayo u qalanta kamarad wanaagsan. Waana iyada oo Sharafta 7X-da ah aysan macno samayn doonin in sidoo kale kamarad lagu qaado dhabarkaaga. Xaaladdan oo kale, oo leh tallaal ka soo horjeedka iftiinka, waxaan ku arki karnaa faahfaahin aad u wanaagsan xagga hore, xitaa dhowr jeer ayaa la soo dhaweynayaa. Oo waxaan aragnaa sida midabbada si fiican loogu kala soocay xitaa iyadoo qorraxda hore.
La kamaradda hore ee sawirada Waxay leedahay shidma quruxsan oo hufan oo ah 8 megapixels. Dhibaato kuma qabno helitaanka sawirro tayo leh. In kastoo, dabcan, ma heli doonno dhammaan qaabeynta la heli karo ee kamaradda hore. Waxay ku taalaa bidixda kore, halkaasoo ay caadiyan caado ka tahay, in kasta oo Honor 7X uu leeyahay shaashad ku jirta gabi ahaanba guddiga. Oo ma ahan sida aaladaha kale ee dhigaya qeybta hoose, adigoo si fudud gacmahaaga loogu dabooli karo.
Marar dhif ah ayaan ku hadalnaa qaybta kaamerada birta ah, ka baxsan magacaabista iyo helitaanka qalabka. Xaaladdan oo kale, waxaan hore u sheegnay inay ku taal bidixda kamaradda laba-geesoodka ah. Iyo in aysan aheyn laba laydh, laakiin waa nooc Led ah. Had iyo jeer way dhacdaa taas toosh aad u awood badan, oo loo isticmaalo si aan la xakamayn karin, ayaa burburin kara tallaalka wanaagsan.
Imtixaankii la qaaday habeenkii iyo iftiin la'aan, si loo arko sida kamaraddu u foojignaato iyo sida tooshku u shaqeeyo waxaan helnay natiijooyin layaableh oo wanaagsan. Ciyaarta la sawiray ayaa sidoo kale ka buuxa midabyo iyo qaabab. Oo waan arki karnaa sida qeexitaanka midabada ay aamin u tahay. Ma daawaneyno milicsiga la buunbuuniyay ama codadka gubtay gabi ahaanba. Xitaa heerka faafaahinta qotodheerku waa mid ku habboon. Shaki la’aan iftiin aad u hagaagsan oo awood iyo iftiin leh.
Sida kamaradda, si aan u duubno fiidiyowyada waxaan sidoo kale ka helnaa waxyaabo aad u xiiso badan. Sida qaabka "Raac walxaha". Thanks to doorashadan, kamaradu waxay diiwaangelin doontaa sheyga la doonayo oo ay diiradda saareysaa xitaa markaad dhaqaaqeyso. Waxaan sidoo kale leenahay qaababka ugu caansan ee dhaqdhaqaaq gaabis ah iyo dhaqsi dhaqsiyo badan. Iyo leh "video xirfad leh" qaabka taas oo aan ku haysan doonno qashinkeena waxyaabo badan oo dheeri ah.
Sida aynu nidhaahno, Maamuus 7X kamarad waan jeclaanay. oo kaliya maahan fuliya si yaab leh waxa aan ku weydiin karno kamaradda taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah. Laakiin xitaa dhaaftay filashooyinka bixinta heer sare marka la eego waxqabadka iyo natiijooyinka. Shaki la'aan bar xoog leh oo qalabkan ah oo aan aad iyo aad u jecel nahay.
Batariga sifiican loo hagaajiyay Honor 7X
Mar kasta oo aan ka hadalno baytariyada waxaan eegeynaa awoodda ay leeyihiin soosaarayaashu. Laakiin sidaan ognahay, batari fara badan marwalba kuma eka is-maamul. Hadana waxaan jecelnahay inaan taas xoojino fiicnaanta walxaha taleefannada casriga ahi waa qayb aasaasi ah. Ma aha oo kaliya hawlgal hufan oo hufan. Sidoo kale waxay muhiim u tahay isticmaalka tamarta in la xakameeyo.
Sharafta 7X waxay bixisaa a Batariga aan laga saari karin 3.340 Mah Li-Ion. Warqad ahaan, mabda 'ahaan ma xuma wax dhan. In kasta oo aan dhihi karno hadda waxaan ka heli karnaa baytariyo awood badan aaladaha kale ee isku nooc ah. In kasta oo, sidaan horeyba u aragnay munaasabadaha, nasiib darro tani ma keento madax-bannaanid sare.
Hagaag, waxaan dhihi karnaa Sharaf waxay sifiican u gudatay shaqadeedii guriga. Iyo qalab muhiimad gaar ah leh, iyadoo la tixgelinayo cabirka shaashaddaada, iyadoo la adeegsanayo tamarta tan ay ku jirto. Waxay bixisaa ismaamul aad u wanaagsan. Way adag tahay in la qiyaaso ama la cabbiro waxa caadiga ah ama daba dheeraaday ee loo adeegsado Smartphone-ka. Marka waxaan soo qaadaneynaa tusaale.
Iyadoo hawlgal maalinle ah kaasoo bilaabmaya 7da subaxnimo. Taas oo hal ama laba saacadood oo Spotify ah lagu daro. Mararka qaarkood daqiiqado podcast ah. Hal ama laba cutub oo ka mid ah taxanaha waajibaadka saaran. Intaa waxaa dheer, dabcan, isticmaalka joogtada ah ee shabakadaha bulshada iyo codsiyada farriimaha. Gudaha taas oo aan u maleyno in loo tixgelin karo adeegsi heer sare ah. Toddobaad dhan oo la isticmaalo Ma jirin hal waqti oo batterigaagu ka dhammaaday 25% dhammaadka maalinta.
Waa natiijooyin aad u wanaagsan, gaar ahaan markii ugu horreysay ee qof aan awooday inaan arko sida taleefannada kale ee casriga ahi aysan awood ugu lahayn inay la socdaan laxankan maalin dhan. Sidaa darteed, Sharaf waa in loogu hambalyeeyo ka dib markii lagu guuleystay in la kala bixiyo madax-bannaanida baytariyadeeda. Waxa aan ka fiirsan karno tusaale aad u fiican oo ah macnahoodu waxa weeye.
Waxay u muuqataa taas Haysashada processor iskeed u sameeya ayaa si weyn u doorbidaysa waxqabadka qalabka si loo gaaro darajo wanaagsan. Heerka adeegsadaha, waa wax lagu farxo in la xakameeyo qalab awood u leh inuu soo bandhigo waxqabad sare oo aan kala go 'lahayn inta lagu jiro maalin dheer iyada oo aan laga warqabin xeedho.
Dhawaaqa iyo kuhadalka Sharafta 7X
Qaybta ku saabsan codka dibadda ee taleefannada casriga ahi waa suurto gal ah mid ka mid ah weyn la illoobay. Waa run inaan adeegsano had iyo jeer yaraynta mobilada. Sameecadaha dhagaha la ', wireless ku hadla, ama sameecadaha baabuurta. Waxaa jira fursado dhowr ah oo aan ku qasbanaaneyno inaan dhageysano muusikada aan ugu jecelahay annaga oo aan isticmaalin kuwa ku hadla mobilada.
Waxaa laga yaabaa in sababtaas awgeed, kuwa ku hadla taleefannada casriga ahi ay yihiin mid ka mid ah dhinacyada ugu yar ee isbeddelay sanadaha. Caddaynta tani waxay tahay in xitaa shirkadaha markii hore doortay af-hayeennada ku hadla ay ku dhammaadeen mid si ay uga faa'iideystaan ​​hawlo kale. J) Haa on Sharafta 7X, maxaa yeelay wuxuu ahaa tonic waxaan leenahay hal afhayeen.
La goobta, sidoo kale sii wadida wixii aan soo aragnay inta badan, ma aha tan ugu habboon. Waxay ku taal meel u dhow isku xira USB. Waana mid aad u badan fududahay inaan ku daboolno gacmaheena markii aan telefoonka si toos ah u qabanno si aad u daawato fiidiyoow, tusaale ahaan. Heerka dhawaqku si xad dhaaf ah uma istaago, laakiin waa ku filan yahay. Heerka mugga ugu badnaan ma aragno gariir ama qalooc.
Xakamaynta mugga si buuxda looma qiyaasi karo. Maaddaama u dhexeysa heerka eber iyo kan xiga uu jiro farqi weyn. Heerka koowaadna wuxuu ka dhawaajiyaa waxoogaa ka xoog badan sidii la filayay. Dhab ahaantii, Hadal keliya oo shaqada qabta - oo aan istaagin, laakiin ma niyad jabo.
Xaashida xogta Huawei Honor 7X
Nidaamka hawlgalka Emuui 5.1 oo ku saleysan Android 7
Screen IPS LCD 5.93 inji
Gacaliye Huawei Kirin 659 - Octa Core 2.36 iyo 1.7 GHz
Xusuusta RAM 4 GB
Kaydinta 32 GB
Kaamirada hore 8 Mpx
Cámara trasera labalaab 16 Mpx + 2 Mpx
Batariga 3.340 Mah
Xiriirinta iibsiga - Sharaf 7X
Sharafta 7X ee ugu fiican uguna wanaagsan
Waa waqtigii aan kuu sheegi lahaa inaan helay Huawei Honor 7X. Runtuna waxay tahay inay ila muuqatay telefoon aad u wanaagsan dhowr sababood awgood. Laga bilaabo naqshadeynta, waxaan wajaheynaa Smartphone qurux badan. Kuwa ay khadadka qalooca iyo dhumucda ugu yar ayaa indhaha ka dhigaysa mid soo jiidasho leh. Iyo tayada alaabteeda iyo isku koobnaanta kulankeeda sidoo kale waxay ka dhigaan mid soo jiidasho leh taabashada.
Waxa ugu fiican ayaa ah inaan sidoo kale wajaheyno Smartphone awood leh oo bixiya khibrad isticmaale gebi ahaanba ku qanacsan. Processor-ku wuxuu si yaab leh ugu shaqeeyaa xaaladaha oo dhan taas oo aan ku tijaabinay. Shaashaddaada iyo kamaraddaada ayaa taagan inta ka hartay inta kale. Ka leexashada in aan wajahno mobiil leh RAM ah lamaheli karo ilaa dhawaantan baaxada laga helay.
Mid ka mid ah taleefannada aan jeclaa inaan aad u isticmaalo xilliyadan dambe. Waa saameyn aad u weyn in la yeesho a kamarad awood u leh bixinta natiijooyin fiican. Waana mid aad muhiim u ah in adiga batteriga Badda awood u leh inay dhammeeyaan maalin daran looma baahna in laga walwalo xeedho. Aniga ahaan Sharafta 7X waxay noqotay mid kamid ah taleefannada casriga ah ee xilligan la taliyo.
Sharafta ugu fiican 7X
Waxa ugu horreeya ee lagu muujiyo sida wanaagsan sidoo kale waa waxa ugu horreeya ee aan eegno, naqshadeynta. Taleefan, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan qalabkiisa dhismaha, dhammaystirkiisa iyo codka guusha leh, waa mid soo jiidasho leh. Waxaad ku xasuusan kartaa iPhone 6 Plus qaababkeeda wareegsan, iyo xitaa halka ay ku taalo kaamirooyinkeeda. Dhab ahaantii waa terminal fiican.
Waxaan muujineynaa shaashadeeda weyn iyo sidoo kale kamarad naga yaabisay sida ugu fiican. Midow qumman oo naga dhigaya inaan ku raaxeysano labadaba.
Waa arrin soo dhaweyn ah in lagu daro kiis silikoon ah, oo waliba u muuqda in lagu sameeyay qalab tayo leh.
Wax kale oo aan jeclaan lahaa inaan tilmaamo, oo kuwa soo saarayaasha qaarkood aysan u muuqan inay muhiim yihiin, waa ogeysiisyada LEDs. Kuweena u bartay la qabashadooda hadhow way tabi doonaan. waxay maareeyaan inay naga dhigaan inaan furfurano taleefannadeenna wax yar.
Ugu dambeyntiina, waxaan ku dareynaa "pro" jawaabta wanaagsan ee uu bixiyo akhristaha faraha. Akhrinta sawirka faraha oo aad u dhakhso badan iyo furitaanka terminalka.
Horumarinta Sharafta 7X
Mar labaad, ma jeclin go'aanka ah in aan lagu darin dhagaha la adeegsado taleefan casri ah oo cusub. Waxay umuuqataa inay noqotay wax iska caadi ah. Laakiin anigu uma arko inay ansax u tahay taas. Waxaan marwalba rabnaa dhagaha.
Qalabka dhismaha waa xarrago, laakiin iyagu waa birlab dhab ah oo loogu talagalay qiiqa iyo faraha. Wax si fudud loo xallin karo oo aan ku dhicin daboolka silikoonku meesha.
Marka la soo koobo, Honor 7X wuxuu noqday smarpthone si loo tixgeliyo. Waxay naga siisaa xagga sare ee heerka dhexe, astaamaha xitaa ka sarreeya. Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin taleefan casri ah oo qurux badan, awoodna ku leh wax walba oo awood u leh in ay kula socdaan, waxaa laga yaabaa inaad heshay taleefankaaga habboon
mugga ugu yar waa mid aad u sarreeya
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Maamuus 7X dib u eegis
Sawirradii ugu horreeyay ee Meizu 15 Plus waa la sifeeyey
Huawei MediaPad M5. Baro naqshadeynta kaniiniga aan ku arki lahayn MWC!